Xisbiyadda xag jirka ah la qorsheeynayo in laga joojiyo booqashadda iskuuladda | Somaliska
Dowladda dalkaan Iswiidhan ayaa la filayaa ineey soo bandhigto hindsi sharciyeed loogu talagalay iskuuladda siddii ay u maarayn lahaayeen karaan xisbiyada siyaasadeed ee booqashada ku taga iskuulada.
Idaacadda raadiyo Iswiidhan oo amuurtan maanta daboolka ka qaaday ayaa sheegtay in qoral hor u dhaca ah oo hindisahan ah ayaa waxaa ku jira qodobo xasaasi ah oo ka horimaan kara dastuurka dalka. Wasiiradda dugsiga sare iyo kor u qaadida tacliinta Anna Ekström, ayaa sheegtay in ay dooneysa in la hirgeliyo sharci cusub ka hor intan doorashada la gaarin, islamarkaasina ay dhawaan doowladda soo saari doonto hindise sharciyeed amuurtaasi la xirriirta.
“Si xowli ah ayey hoowsha u socotaa uga socotaa madaxtooyada iyadoo dhawaana ay soo baxi doona hindise sharciyeedkaasi maamulayaasha iskuulada u sahli doona howlshooda markii iskuulka lagu marti qaado xisbi” ayey tiri wasiiradda.
Hindisehaan oo sidoo kale ah mid xasaasi ah oo u muuqda mid ka hor iman kara dastuurka dalka u degsan. Xukumaduna waxaa ay dooneeysa in maamulayaasha iskuulka fursad u siiso in ay xisbiyada qaarkood u diidan booqashada iskuulka. Doorashadii baarlamaanka ee kal hore dhacday ayaa abuurtay jaha wareer iskuulo badan kala kulmeen sida ay u maarayn lahaayeen xisbiyada siyaasadeed ee doonayey iney ay iskuulada soo booqdaan, sababo la xirriira sharciga degsan oo qeexaya booqashadda iskuuladda.
Dhinaca kalena iskuuladda ayaa cabsi ka qaba in ay sameeyaan qalad marka ay timaado booqashadda xisbiyadda, taasina waa mid keentay aysan marti qaadin xisbi siyaasadeed. Xukuumaddii hore ee dalka ka talin jirty ayaa bilowday wax ka baddelka sharciga iyadoo howlsha ay kala sii wareegtay xukumadda hadaatan jirta. Xeel-dheerayaashuna waxeey muddo dheer dood ka qabeen in sharci noocaan ah uu ka horimaanayo mabda’a dhexdhaaxaadnimada oo ah qayb ka mid ah dasturuuka dalka u dagsan.